Maraoka: Ireo Arabo mpiangaly Rock · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2018 3:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Français, عربي, Italiano, Nederlands, English
Tsy manivaka ny tamin'ity taona ity.
“Rock God” avy amin'ny Bring Back Buck tao amin'ny Flickr
Toa miroborobo miaraka amin'ireo tarika Rap, Rock, Fusion ary tarika Heavy Metal efa mahazo vahana mahazo mpijery mihitsy aza ny ny sehon-kira.
Manoritsoritra ny fitomboan'ny lazan'ny karazan-kira hip hop vaovao ao amin'ny fitondram-panjaka, sy niresadresaka tamin'ilay mpiangaly rap Maraokana Amerikana, RS-LOU ny Moroccan Board, vavahadim-baovao iray natao ho an'ny Maraokana Amerikana sy mitatitra momba ireo lohahevitra maro mifandraika amin'i Maraoka:
Ny Hip Hop Maraokana amin'ny maha-karazana mozika azy dia nahazo laza teo amin'ny tanora tao anatin'ny taona vitsivitsy tao Maraoka. Mahafantatra anarana maromaro ianao ankehitriny toy ny Casa Crew, H-Kayen, AlFaress, Fnaire, ary mitohy ny lisitra. Misy ihany koa ireo vondrona mpanakanto miasa any ivelan'i Maraoka. RS-LOU ohatra.
Mibilaogy ao amin'ny Huffington Post i Mohsin Mohi-Ud Din, mpiangaly mozika sy mpikatroka mitarika ny tetikasa Fullbright any Tanger, avaratr'i Maraoka, mahita fa “manao Rock ny Arabo” ary nohazavainy ny fomba nahatonga azy ho any amin'ny faritra tsy mahazatra:
Nanatri-maso fampisehoana adaladala nataon'ny tarika Metaly Maraokanina antsoina hoe WANTED tao amin'ny Cinema Rif aho. Feno ny toerana. Nifalihavanja sy nanao akanjo bà misy satroka sy t-shirts AC/DC ireo tanora arabo, mihovitrovitra rock.
Tsy dia misy fahasamihafana amin'ny tanora mpiangaly rock be tabataba, leo sy mikorontana ao Amerika ireo tanora Arabo mpankafy rock eto. Na dia izany aza, mahafinaritra sy miavaka ny mahita tovovavy manao voaly nentin-drazana (Hijab) manao ny famantarana manerantany Metal/Rock amin'ny tanany!
Tsara ny manamarika fa efa rava tamin'ny taona 2003 ny sehatra metaly mavesatra Maraokanina, raha nanagadra ireo mpiangaly mozika 14 ho satanisma sy fanevatevana ny silamo ny fitsarana tao Casablanca. Niteraka fihetsiketsehana teo amin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ity fanapahan-kevitra ity ary nanery ny manampahefana mba hanaisotra ny fiampangana. Hita fa manomboka miverina ny seho metaly miaraka amin'ny taranaka vaovao Maraokanina ny metaly mavesatra.
Tany am-piandohan'ity taona ity, fanadihadiana mitondra lohateny mazava hoe “Tiako ny Hip Hop ao Maraoka” no nametraka ny feony nandritra ireo andro sy taona maro, araka ny tatitra nataon'ny bilaogy From Warp to Weft:
Mampiseho ireo mpanakanto Hip Hop Maraokanina tahaka an'i DJ Key, H-Kayne, Fnaïre, MC Bigg, Brownfingaz, Mot de Passe, FatiShow, ity horonantsary ity dia milomano ao anatin'ny “eritreritra sy nofinofin'ny tena hoavin'ny tontolo Arabo – ny tanora.”
Fanamarihana: Tamin'ny fotoana nandraisana ity lahatsoratra ity, nitatitra ny sampam-pahalalaham-baovao fa olona 11 raha kely indrindra no maty ary 30 no naratra tamin'ny Asabotsy alina, 23 aprily, nandritra ny fampisehoana mozika tao Rabat tamin'ny Fetiben'ny Mozika Mawazine, rehefa nirodana ny fefy vy iray.